Home Wararka Guddiga Doorashada oo laaley laba ka mid ah kuraasta lagu boobay...
War saxaafadeedka ka soo baxay FEIT ayaa sheegay in lagu celinayo doorashada laba ka mid ah kuraasta Doorashada aqalka hoose ee ka dhacday magaalada Baydhabo kuwaas oo kala ah HOP154 iyo HOP103
Sidoo kale wuxuu guddiga caddeeyay muranka ka taagan kuraas lagu doortay Galmudug ee go’aankooda laga sugayo Guddiga xalinta khilaafaadka.
Guddiga doorashada FEIT ayaa awood u leh aqbalida natiijada doorashada kuraasta iyo Xildhibaanka la soo doorto inuu siiyo kaarka aqoonsiga ee rasmiga ah.
Guddiga doorashada heer Federaal ayaa gebi ahaanba laalay habraacii doorashada ee ay horay u qorteen Ra’iisul Wasaare Kuxigeenka Mahdi Guuleed iyo Cabdi Xaashi.
Habraacan ay soo saarteen ayaa ahaa mid ku koobnaa kaliya Doorashada Aqalka Sare, balse markii dambe ku darsaday habraaca doorashada Golaha Shacabka oo ka dhigayay inay iyaga maamulaan, maadaama Golaha Wadatashiga Qaran ay horay u soo saareen habraaca doorashada Golaha Shacabka.
Go’aankan ayaa ku noqonaayo caqabad weyn Qoor Qoor iyo Lafta Gareen oo watay qorshe aay ku soo celiyaan Farmaajo si aay u sii joogaan hoggaanka DG Koofur Galbeed iyo Galmudug.
Previous articleGuddiga xalinta khilaafaadka oo Mudada u kordhiyay Go’aan ka gaarista kursi HOP067
Next articleGuddiga doorashada oo dharbaaxo culus ku dhuftay Cabdi Xaashi iyo Mahdi Guuleed
(XOG) Bada Soomaaliya ma iibsaday Maxamed Cabdullahi Farmaajo?